Carruurta abaaraha ka soo barakacay oo waxbarasho haysta balse cunto la'aan ah
Radio Ergo 03 May, 2017 MUQDISHO
(ERGO) - Maryan Colaad Cumar oo 12 sano jir ah oo qoyskeedu abaar uga soo bakaracay degmada Wanlawayn afar bil ka hor ayaa ka mid ah 613 ardey oo waxbarasho bilaash ah ay siisey bishii Janawari Dallada iskuullada waxbarashada ee gaarka loo leeyayey ee magaalada Muqdisho (Formal Education Network of Private Schools).
Maryan oo dhigata fasalka afaraad ee dugsiga hoose ee Dheeman oo ku yaalla degmada Kaxda ee magaalada Muqdisho, waxay iskuulka aadda subax walba ayadoo gaajeysan oo aan quraacan maadaama aysan heli karin wax cunto ah.
Nolasha qoyska waxay hadda ku tiirsan tahay hooyada Maryan oo maalintii shaqooyin yar yar ka soo qabata magaalada sida dhar-dhaqidda oo ay ugu badnaan ka hesho lacag dhan boqol kun shilin Soomaali ah oo u dhiganta afar dollar iyo bar. Odeyga reerka ma shaqeeyo oo carruurta ayuu guriga ku hayaa.
Qoyska oo ka kooban 12 carruur ah iyo labada waalid waxay lacagtaas u goysaa inay qado oo kaliya karsadaan 24 saac.
“Toddobada aroortii ayaan gala fasalka anigoo wareeraya gaajo dardeed cashirka xataa si fiican uma fahmo, marka ugu horreysa ee aan wax cunto helo waa 12:00-ki markaan ka soo baxo iskuulka,” ayey tiri Maryan Colaad.
Nolasha qoyskooda waxay ku tiirsanayd ka hor abaarta beer ay ku laahaayeen degmada Wanwalyn oo ay uga soo go’i jireen dalagyada masagada iyo digirta oo ay qaarna iibisan jireen qaarna ay cunto ahaan u istimaali jireen.
Maryan oo hadda ay iskuullka la dhigtaan 3 gabdhood iyo laba wiil oo la dhalatay oo kala dhigta fasalladda koobaad iyo labaad ayaa abaarta ka hor waxay ahayd qofka kaliya ee iskuul dhigata gurigooda kadib markii ay iyadu ka codsatay aabbaheed in uu geeyo iskuulka, asagoo bishi ka bixin jiray lacag dhan 40 kun oo shilin Soomaali ah. “ Baahida waxaan ugu adkeysanayaa waxaan doonaya mustaqabalka in aan noqodo dhaqtarad daawaysa dadka danyarta ah si aan taasi u gaaro waa in aan wax bartaa,” ayey tiri Maryan.
Hibaaq Axmed Xaashi oo ah maamulaha iskuulka Dheyman oo ay dhigtaan ardayda ka soo barakacay abaaraha ayaa Ergo u sheegtay in Caruurta ay ka caawiyaan bugaagta, qalimaanta iyo waxbarshada oo bilaasha ah balse aysan u awoodin inay cunto siiyaan. “ Waxbarashada waa bilaash balse caqabadda ayaa ah ilmo gaajeysan in wax la baro ay aad u adag tahay hadana waxaan u sheegnaa ardeyda inay xoogga saaraan tacliinta oo aanay ka fikirin cuntada oo kaliya inkastoo ay muhiim u tahay nolashooda,” sidaas waxaa Ergo u sheegtay Hibaaq.
“Bishi 12-aad ayaan ka soo barakacnay deegaanka Doonkeey oo Baydhabo u jira 2 km dhanka koonfureed. Waan soo lugeynay oo waxa ay nagu qaadatay labo toddobaad in aan imaano Muqdisho,” ayey tiri Nadiifo Cabdiqani Cumar oo ah 12 sano jir oo iyada iyo labo walaalaheed ah ay ka faa’ideysnayaan waxbarashadan bilaash ka ah.
Aabbaha dhalay Nadiifo wuxuu nolasha guriga ku maareyn jiray beer isaga uu lahaa oo muddo laba sano ka badan wax dalag ah uusan uga soo go’in, taasina ay keentay markii ay ku adkaatay nolasha degaankaasi in ay u soo barakacaan magaalada.
Iskuulka oo la furay bishi koobaad ee sanadkan ayaa loo qorsheyay in waxbarasho bilaash ah ay ka helaan carruurtaa qoysaks kasoo barakacay abaaraha ka jira gobollada Bay, Bakool, iyo Shabeellaha Hoose ee ku nool xeryaha qoysaska soo barakacay ee degmada Kaxda.